“Squirrel” လို့ခေါ်တဲ့ Messaging App တစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Yahoo!!! – AsiaApps
May 10, 2018 May 10, 2018 MoonApp NewsNo Comment on “Squirrel” လို့ခေါ်တဲ့ Messaging App တစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Yahoo!!!
ခုနောက်ပိုင်း နာမည်ကြီးရေးပန်းစားလာတဲ့ app အမျိုးအစားတွေထဲမှာ messaging app တွေတော်တော်များများ ပါလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ သုံးရတာ မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီး အင်တာနက်၊ ဝိုင်ဖိုင်ရှိရုံနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့အပြင် voice call တွေ၊ video call တွေပါ ခေါ်ဆိုနိုင်တာကြောင့် သူတို့တွေကို လူသုံးများနေကြတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ခုနှစ်ရဲ့ စစ်တမ်းအရ messaging app တွေအသုံးပြုနေတဲ့ active users အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၅ ဘီလီယံ တောင်ရှိပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာကော message ပို့လို့ရတဲ့ app ဘယ်နှခုထိရှိလဲ ??? ယေဘုယျအားဖြင့် Smartphone အသုံးပြုသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ အနည်းဆုံး messenger app နှစ်ခု အထိရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Messenger နဲ့ Viber ပေါ့နော်။ ဒါတောင် we chat တို့ Line တို့ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ အခုဆိုရင် Yahoo ရဲ့ “Squirrel” ပါ ထပ်တိုးလာပါပြီ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း messaging app တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု အားကောင်းလာတာကြောင့် အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yahoo ကလည်း messager app တွေဘက် ခြေဆန့်လာတာလို့ထင်ပါတယ်။
“Squirrel” က နာမည်ကြီး chat app တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Slack နဲ့ ပုံစံချင်း နည်းနည်း တူပါတယ်။ သူ့ထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စာပို့လို့ရမယ့် Chat Room နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အခြားလူဆီ မပေါက်ကြားအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပို့နိုင်မယ့် Secret Room ဆိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်။
အခုမှ အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုသူသန်းပေါင်များရှိနေတဲ့ “WhatsApp” တို့ “Facebook Messager” တို့ကို အမှီလိုက်နိုင်ဖို့ တော်တော်လေးတော့ အချိန်ယူရမှာပါ။ အသစ်အဆန်းတွေကို စမ်းသပ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် “Squirrel” မှာ အခြား massager app တွေနဲ့ ဘယ်လို တူညီမှု ၊ ကွာခြားမှုတွေရှိလဲ၊ အသုံးပြုလို့ရော ကောင်းရဲ့လား၊ဆိုတာကို သိရဖို့အတွက် သုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။ App Store နဲ့ Play Store မှာ အခမဲ့ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်နေပါပြီ။ (Invite-only အဆင့်သာရှိပါသေးတယ်။)
Feature အသစ်တွေပါဝင်လာတဲ့ YouTube app update အသစ်